यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन अधिक सफल र धनी ! | सुदुरपश्चिम खबर
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन अधिक सफल र धनी !
७ वटा बार मध्ये आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दावी छ । कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउनुस् ।
यी ४ राशि भएका मानिससँग संसारकै अद्भुत शक्ति हुन्छ !!
आइतबारःपुरुष आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ । स्त्री आइतबार जन्मिने स्त्री दान(पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् ।
सोमबारःपुरुष सोमबार जन्मिने ब्यक्तिको बोली मिठो हुन्छ । यस्ता ब्यक्तिको जीवनमा सुख दुख बराबर जस्तै हुन्छ किन भने उनीहरुलाई दुःख सुख उस्तै उस्तै लाग्छ । सोमबार जन्मिने ब्यकेति विद्वान, कला कुशल र बहादुर पनि हुन्छन् । सोमबार जन्मिने ब्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासको रोग हुन सक्छ यस्ता ब्यक्तिलाई ९, १२, २७ वर्षमा कष्ट हुन्छ । स्त्री सोमबार जन्म भएका महिला सुन्दर हुन्छन् । यस्ता महिलामा मिठो बोली र शान्ति प्रिय र पुत्रवति हुन्छन् ।
मंगलबारःपुरुष मंगलबार जन्म हुने ब्यक्ति सामान्यतया धनी हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिको स्वभाव उग्र हुन्छ । यसै कारण उनीहरुसँग मानिसहरु वेखुसी हुन्छन् । यिनीहरुलाई छाला सम्बन्धी रोग हुन सक्छ । दुख र सुख आउने जाने भैरहन्छ । स्त्री ज्योतिषका अनुसार मंगलवार जन्म भएका स्त्री कठोर हृदयका हुन्छन् यस्ता स्त्रीमा दया माया कम हुन्छ । यस्ता स्त्री दुब्ला पातला र झगडालु समेत हुन्छन् ।
बुधबारःपुरुष बुधबार जन्मिने ब्यक्ति धर्मकर्ममा मन भएका हुन्छन् । यिनीहरुको बोलीमा मिठास हुन्छन् । यिनीहरुको ८ र २२ वर्षको उमेरमा कष्ट पाउने योग हुन्छ । स्त्री बुधाबार जन्मिने स्त्री कुनै विशेष क्षेत्रमा रुचि राख्ने र विशेषज्ञता हासिल गर्ने हुन्छतन् । सरस्वतीको विशेष कृपा हुने हुँदा यिनीहरु सुन्दर र शुसील पनि हुन्छन् ।
विहीबारःपुरुष विहीबार जन्मिने पुरुष विद्वान र पराक्रमी हुन्छन् । यिनीहरुले जीवनमा धेरै उतार चढाव र समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । तर पनि साहसी हुन्छन् । यिनीहरुसँग संगत हुनेहरु खुसी हुन्छन् । विहीबार जन्मिनेहरुलाई ७, १२, १३, १६ र ३० वर्षमा संकट पर्छ । स्त्री जुन स्त्रीको विहीबार जन्म हुन्छ त्यस्ता महिला उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र सर्वगुणी हुन्छन् ।
शुक्रबार ःपुरुष शुक्रबार जन्मिने ब्यक्ति हँसिलो स्वभावका हुन्छन् । बुद्दीमान र मृदुभाषी यिनीहरुको स्वभाव हो । यिनीहरु सहनशिल पनि हुन्छन् । यिनीहरु शौखिन हुन्छन् र २० र २४ वर्षको उमेरमा कष्ट हुन्छ । स्त्री कुनै पनि स्त्री शुक्रबार जन्मेकी छे भने उसको श्वभाव चंचल हुन्छ । यस्ता स्त्री मस्ती मजाक गर्छन् । परिवार र समाजमा विशेष इज्जत हुन्छ । केही काला रंगका भएपनि सुन्दर हुन्छन् ।
शनिबारःपुरुष जुन ब्यक्तिको जन्म शनिबार हुन्छ उनीहरु कृषि ब्यावार वा प्रविधीको क्षेत्रमा रुची राख्छन् । यिनीहरुका लागि बाल्यकाल कष्टपूर्ण हुन सक्छ । भाइ बहिनी वा दाइ दिदीबठ्ठ सन्तुष्टी मिल्दैन । यिनीहरुलाई २० र २५ वा ४५ वर्षमा कष्ट हुन्छ । स्त्री शनिबार जन्मिने स्त्री दुबली पातली हुन्छन् तर अग्ला । सामान्यतया यस्ता स्त्री कालो वर्णका हुन्छन । यस्ता महिला अरुका कुरा काट्ने पनि हुन् सक्छन् ।
यसैगरी हरेक व्यक्ति आनन्दित जीवन बिताउन चाहन्छ । हिन्दू धर्मशास्त्रका अनुसार, राम्रो र सुखी जीवन जीउन केही नियमहरु पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ पुराणमा यो स्पष्ट रूपमा वर्णन गरिएको छ कि पुरुष र महिला दुबैलाई जीवनमा सुख र शान्तिको लागि मार्गनिर्देशनको अनुसरण धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ एक व्यक्ति धनी होस् वा गरिब, यदि उसले यी नियमहरू पालन गर्दैन भने, तब उसले आफ्नो जीवनमा समस्याहरूको सामना गर्नुपर्दछ ।हिन्दू क्यालेन्डरका अनुसार पुरुषहरूले अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी र अष्टमीमा सबै महिनामा तेल मालिश र मांसाहारी खाना खानु हुँदैन । यस्तो गर्नाले व्यक्तिको जीवनमा सबै खुशी र शान्ति सुरु हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा पुरुषले कुनै पनि विदेशी महिलालाई हेर्नु हुँदैन । यसले तिनीहरूलाई पतन गराउन सक्छ यदि तपाईं जहिले पनि धनवान हुन चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो खुट्टा राम्रोसंग सफा गरेपछि मात्रै घर भित्र प्रवेश गर्नुहोस् । यस्तो गर्नाले लक्ष्मी देवी तपाईंको घरमा बस्छिन् र घरमा खुशी र शान्तिको वास रहन्छ ।
मूर्तिहरू, तस्विर, बत्तीहरू, शिवलिङ्ग, सुन, शंख र धागो आदि देवीदेवताहरू कहिले पनि भुइँमा राख्नु हुँदैन । यदि तपाईं तिनीहरूलाई भुइँमा राख्न आवश्यक ठान्नुहुन्छ भने सधैं जमीनमा कपडा राख्नुहोस् दिनको समय वा सूर्यास्तको समय उपासनाका लागि लाभदायक हुन्छ । यो भनिन्छ कि पुरुष र महिलाले यस अवधिमा शारीरिक सम्बन्ध राख्नु हुँदैन । यो समयमा सम्बन्ध राख्दा लक्ष्मी देवी रिसाउन सक्ने खत्तरा हुन्छ ।
धर्मशास्त्रका अनुसार व्यक्तिले जेठो व्यक्तिको अपमान गर्नु हुँदैन । आमाबाबु, शिक्षक, महिला र वृद्धवृद्धारूको अपमान गर्छन उनीहरुले लाभ पाउन सक्दैनन् आफु भन्दा ठुला मान्यवरहरुको अपमान गर्नेसँग कुबेर, धनका देवता रिसाउन सक्छन् । यसले आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।ति मानिसहरु जसको सोच नकारात्मक छ वा उनीहरु सफाईको ख्याल राख्दैनन्, उनीहरुले पनि लाभ लिन सक्दैनन् तपाईं त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट टाढा रहनुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूले तपाईंको वरपरको वातावरणलाई नकारात्मक बनाउँदछन् र तपाईंलाई विनाशमा लैजान्छन् यो विश्वास गरिन्छ कि तामाको भाँडाहरू आइतवार प्रयोग गर्नु हुँदैन । यसो गर्नाले भगवान सूर्यदेव रिसाउन सक्नुहुन्छ ।(gnewsnepal बाट सभार)
वास्तु शास्त्र अनुसार राति सिरानीमुनि यी चिज राख्नुहोस्, केही दिनमै चम्किनेछ तपाईको भाग्य !!
भगवान शिवको पूजा आराधना गर्दा नगर्नुहोस् यी गल्ती !!
कुन राशिका व्यक्तिले कुन भगवानको पुजा गरे चम्किन्छ भाग्य !!
भगवानलाई चढाएको फूल ओइलाएपछि कसरी फाल्ने ?
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन माओवादी केन्द्र तयार !!
यी हुन ६ कारण खाना नपच्ने र अपच हुने समस्याका !!